आगामी चुनावसम्म नै गठबन्धन | eAdarsha.com
आगामी चुनावसम्म नै गठबन्धन
माधवप्रसाद बास्तोला (मधु) प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस, गण्डकी प्रदेश
राजनीतिकर्मी एवं समाजसेवी माधवप्रसाद बास्तोला (मधु) नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश समितिका प्रवक्ता हुन् । प्रदेश समितिमा सदस्यको भूमिकामा रहेका उनको राजनीति २०३८ सालबाटै सुरु भयो । नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति यात्रा आरम्भ गरेका उनी त्यसपछि २०४८ सालमा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य बने । यही क्रममा बास्तोला वडाको इकाइ सभापति र नेपाली कांग्रेस कास्की दुई नम्बरको क्षेत्रीय कार्यसमितिको सहसचिवको भूमिकामा पनि रहे । २०५४ सालमा निर्वाचित वडा अध्यक्ष हुन पुगे । दुईपटकसम्म कांग्रसको क्षेत्रीय सभापति निर्वाचित उनले यो पदमा रही ११ वर्ष काम गरे । कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य पनि हुन् बास्तोला । दलको नेतृत्व तहमा इमानदारिताको अभाव देखिन थालेको भन्दै उनले यो चिन्ताजनक विषय भएको बताए । पोखराको शैक्षिक विकासमा समेत बास्तोलाको भूमिका प्रशंसनीय छ । राजनीति शास्त्रमा एमए र कानुनमा बिएल गरेका बास्तोला पोखरा फुलबारीका बासिन्दा हुन् । समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित गरी बास्तोलासँग आदर्श समाज राष्ट्रिय दैनिकका रुपनारायण ढकालले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
नेपाली कांग्रेसको गण्डकी प्रदेश कमिटीले के गर्दै छ अहिले ?
राज्यको पुनर्संरचना भएपछि नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो विधानमा प्रदेशको अवधारणा लिएर आयो । सोहीअनुसार ७ वटा प्रदेश समितिको व्यवस्था गरियो । कार्यसमिति, काम र कार्यान्वयन पनि नयाँ संरचनाअनुसार हुने भयो । चौधौं महाधिवेशन पछि निर्माण भएको प्रदेश कार्यसमितिले आफ्नो विधानको व्यवस्था अनुसारका कामहरु क्रमिक रुपमा अगाडि बढाएको छ । जसअनुसार कार्यालय व्यवस्थापन गरियो । कार्यसमितिमा कार्यसम्पादन समिति, संसदीय समिति र विभागहरु गठन गर्ने कुरामा लाग्यौं । अघिल्ला दुई काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । विभाग गठन गर्ने कुरा बाँकी नै छ । हामीसँग २२ वटा विभाग हुन्छन्, प्रदेश अन्तर्गत । विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी विभागहरु गठन गर्ने प्रक्रियामा छौं ।
संघीयताकै कुरा गर्दा प्रादेशिक संरचनाप्रति जनताको ठूलो असन्तुष्टि देखिन्छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सम्मको आवाज उठेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
वास्तवमा हाम्रो सानो देशमा यति धेरै खर्चको कुरा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ । संघीय शासन हुर्काउन र बढाउन चाहिने धेरै खर्चले गर्दा यो संरचना गरिबलाई हात्ती दान दिएजस्तो भयो । यतिधेरै मन्त्री र यतिधेरै सांसदलाई कसरी खर्च पु¥याउने । कि त सुविधा लिनु भएन । जनताको सेवा गर्ने हो भने जनप्रतिनिधिले सुविधा लिन्न भन्न सक्नुपर्‍यो । चुनाव जित्न प्रशस्त खर्च गर्ने र सुविधा पनि प्रशस्त लिने देखियो । गरिब र नागरिकले केही पाएका छैनन् । दिनदिनै महँगी र अभाव छ तर जनप्रतिनिधिले सुविधामात्र लिएको देखिन्छ । यसकारणले यो संघीयता भन्ने विषय नेपालमा सिधै स्थानीय निकाय र संघमात्र व्यवस्था भयो भने राम्रो भन्ने छ । बीचको प्रदेश राख्दा खर्च धेरै भयो भन्ने आम नागरिकको भनाइ छ । यस्सो हेर्दा मन्त्रीहरु मन्त्री हुनकै लागि लडाइँ गर्ने, टिकट पाउन र सुविधाका लागि लडाइँ गर्ने देखिएको छ । महँगो कर उठाउने र तिनलाई खर्च गर्ने । यो खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण पनि नेपालमा संघीय शासन प्रणाली त्यति राम्रो धान्न सकिने अवस्था लाग्दैन भन्ने नागरिक र विचारणीय कुरा हो । यो परीक्षणमा नै छ । कसरी सर्भाइबल गर्न सकिने नसकिने शंकाको विषय भयो । हरेक नागकिले संघीयता कामै छैन, हिजोको २०५ निर्वाचन क्षेत्र, ७५ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्र नै ठीक थियो भन्ने अधिकांशको धारणा फर्मेसन हुन थाल्यो । त्यस्तो होइन है भन्ने कुरा राजनीतिक दलले देखाउनुपर्ने देखिन्छ ।
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन नतिजालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो । चुनावमा खासगरी यो प्रदेशको कुरा गर्दा पहिला ८५ वटा स्थानीय तहमा ४४ वटा कांग्रेसले जितेको अवस्था थियो तर अहिले ५ दलीय गठबन्धन बनाएर चुनावमा जोडिएकाले गठबन्धनका सदस्य दललाई समेत सिट व्यवस्थापन गर्नु पर्दा ३६ वटा स्थानीय तहमा मात्र हामीले चुनाव जित्यौं । तर यहाँ देखियो के भने ५ दलीय गठबन्धन भनिए तापनि गठबन्धन गर्ने केन्द्रीय कार्यालयले नीति त बनायो तर कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश, जिल्ला र पालिकालाई लगायो । निर्देशन त गरियो तर तल्ला निकायसम्म आइपुग्दा त्यो कति ठाउँमा मिल्यो, कति ठाउँमा मिलेन । मिलेको ठाउँमा त राम्रै भएको देखिएको छ । नमिलेको ठाउँमा हामीहरुकै कारणले मिलेन । किनभने हामी मिल्न सकेनौं अनि अपेक्षित परिणाम नआएको अवस्था पनि छ ।
कांग्रेसजस्तो ठूलो दललाई चुनावमा गठबन्धनको आवश्यकता किन पर्‍यो ?
गठबन्धनको आवश्यकता किन पर्न गयो भने केपी शर्मा ओली सत्तामा गएपछि हिजोको दिनमा माओवादी र एमाले मिलेर संसदीय चुनाव लडे । नेपालमा गणितीय हिसाबमा वामपन्थीको संख्या धेरै पनि देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक शक्तिको गणित कम नै देखिन्छ । हिजो उनीहरु दुई पार्टी मिलेर लडेका हुनाले संघीय र प्रदेशको निर्वाचनमा कांग्रेसको संख्या न्यून देखियो । त्यो देखिएकै कुरा हो । त्यो भन्दा पनि उनीहरु मिलेर सरकार चलाए पनि पछि नमिलेका कारण उनीहरु टुक्रिन पुगे । यसबाट के भयो भने पार्टीभित्रको द्वन्द्वलाई सार्वजनिक गरियो । ओलीले एकात्मक खालको साशन व्यवस्था सञ्चालन गर्न खोजे । विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धि पनि गुम्ने डर हुन थाल्यो र संसद नै दुई दुई पटक विघटन गरियो । संविधानले सुरक्षित गरेको संसदलाई पनि विघटन गर्ने, लोकतन्त्रको अभिमतलाई बहिस्कार गर्ने र कानुन नै मान्दिनँ भनेजस्तो अवस्थाविरुद्ध अन्य दल एक भए ।
खर्चिलो संघीय शासन संरचना गरिबलाई हात्ती दान दिएजस्तो भयो । यतिधेरै मन्त्री र सांसदलाई कसरी खर्च पुर्‍याउने
गठबन्धनको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? आउँदो चुनावमा पनि गठबन्धन गर्ने हो ?
ओलीले विघटन गरेको संसद पुनर्बहाली भएपछि सत्ता चलाउन भए पनि गणित त पुर्‍याउनै पर्ने भयो । गठबन्धन गर्नु एउटा बाध्यात्मक अवस्था भयो, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि । स्थानीय तहसम्म यो गठबन्धन गरेर जाने कुरा थियो पहिला तर जतिसुकै कुरा गरेपनि माओवादीको सिट संख्यालाई हेर्ने हो भने गठबन्धनकै कारण उसले राम्रै सिट ल्याएको छ, देशभरिको नतिजा हेर्दा । एमालेबाट टुक्रिएको नेकपा (एकीण्कृत समाजवादी) को संख्या संसदमा ठिकै देखियो तर फिल्डमा जनाआधार यकीन थिएन, उनीहरुको अवस्था के छ भने कांग्रेससँग गठबन्धन नगरे उनीहरुको पनि भविष्यमा अवस्था यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आएपछि कांग्रेस र माओवादीलाई पनि राम्रै भयो । एकीकृत समाजवादीलाई अलिकिति भनेजस्तो भएन कि भन्ने पर्न गयो । पोखराको कुरा गर्दा गठबन्धन नगरेको भए महानगरको चुनाव जित्ने अवस्था थिएन । गठबन्धनले निरन्तरता पाउने नपाउने आम नागरिकको पनि चासो छ । यसमा के छ भने गठबन्धन हिजोको संघीय निर्वाचन र प्रदेश निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दा गठबन्धन विना कसैले पनि अपेक्षा गरेजस्तो मत ल्याउन सक्दैनन् । त्यही भएर पनि गठबन्धनका दलहरु आफू सर्भाइबल गर्न आउँदो चुनावमा पनि यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन्छन् । अहिले बाहिर छापा र सामाजिक सञ्जालमा आएको कुरा घुक्र्याउने र धम्क्याउने कुरामात्र हो । अहिले गठबन्धन छाड्छु भन्ने कुरा बार्गेनिङको कुरा हो । बागेनिङका लागि गठबन्धन छोड्छु भन्ने कुरा आएको हो ।
चुनावी नतिजालाई लिएर माधव नेपालको असन्तुष्टि पनि देखियो, कांग्रेस इमानदार नबनेको कुरा पनि आयो ?
उहाँहरु नयाँ दल हो । नयाँ दलको संरचना बनाउन उहाँहरुलाई गाह्रो छ । उहाँहरुलाई यति चाँडो चुनाव नहोस् भन्ने पनि थियो होला । किनभने उहाँहरुको संरचना फिल्डसम्म पनि पुगेको थिएन । अहिले उहाँहरुले जे प्राप्त गर्नुभयो त्यो नै उपलब्धिमूलक हो । उहाँहरुको अवस्था के देखियो भने वडामा पनि सदस्य उठाउन सक्ने अवस्था बनेको रहेनछ । यो धेरै ठाउँमा देखियो । पोखरामा नै पनि देखियो । पूर्वतिर राम्रै रहेछ । तर यहाँ त्यस्तो देखिएन । उहाँहरु पनि आफूलाई सेटलमेन्ट गर्न तत्काल एमालेसँग मिल्ने कुरा पनि गाह्रो देखिन्छ । माओवादी र एमाले मिलेमा वा कांग्रेस र एस (समाजवादी) को अवस्था के होला ? माओवादी र कांग्रेस मिले एमाले र एसको अवस्था के होला ? यस्तो अवस्था देखिन्छ । त्यसकारण उनीहरुले आफ्नो अस्तित्व बचाउन पनि गठबन्धन अपरिहार्य देखिन्छ गणितमा । आउने प्रादेशिक र संघयि चुनावमा पनि यो गठबन्धनले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । अर्को कुरा संविधान प्रतिको अतिक्रमण रोक्न पनि गठबन्धन आवश्यक छ भन्ने कुरा पब्लिकले पनि बुझे र मौजुदा पार्टीका मान्छे जो हिजो आन्दोलन गरेर आए तिनीहरुले पनि यो बुझ्न जरुरी छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि कतिपय ठाउँमा चुनाव जिते, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामी मल्टिपार्टी सिस्टममा विश्वास गर्ने मान्छे । यहाँ आवधिक चुनाव हुन्छ । बहुमत ल्याउनेले गभर्निङ गर्छ । अब यहाँ व्यक्तिहरुले चुनाव जिते । एउटा व्यक्तिले किन चुनाव जिते भने अलिकति दलहरुप्रति विकर्षण हो कि भन्ने मानिसलाई लागेको छ । तर यसको एउटा नराम्रो पक्ष के देख्छु भने एउटा व्यक्तिले केही पनि गर्न सक्दैन । एउटा व्यक्तिले भिजन राम्रो ल्याउन सक्छ तर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि काठमाडौंका मेयर बालेनले भिजन त ल्याउनुहोला तर भिजन कार्यान्वयन गर्न त शक्ति चाहिन्छ । त्यो शक्ति र समूह उहाँसँग छैन । जस्तै पोखराको मेयरसँग भिजन होला, राम्रो गर्न खोज्नुहोला तर बोर्डमा उहाँलाई सहयोग गर्ने उहाँबाहेक अरु त छैन । सहयोग गर्ने त ग्यारेन्टी हुनुप¥यो नि । व्यक्तिले आफ्नो प्रभाव र भिजनले चुनाव जित्ने कुरा सकारात्मक र राम्रो कुरा हो तर भिजनलाई कार्यान्वयन गर्न शक्ति र संगठन चाहिन्छ । संगठनबिना हाम्रो देशमा विकास र काम कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । देख्दा पपुलर मान्छेले चुनाव जित्यो, राम्रो भयो भने तापनि परिणाम आउन गाह्रो देख्छु । हिजो एमालेले पोखरामा चुनाव जित्दा उहाँहरुका धेरै बोर्ड सदस्य थिए, धनराजको सन्दर्भ जोड्दा । दलहरुले अनुकूल र प्रतिकूललाई विचार गरेर मात्र सहयोग र असहयोग गर्छन् तर यस्तो गर्नु हुँदैन । स्वतन्त्रले जित्नु लोकतन्त्र र मल्टिपार्टी सिस्टमको लागि राम्रो होइन । उहाँहरुले जित्नुभयो ठीक छ । तर हामी बहुदल मान्नेले त दलकै मानिसले चुनाव जित्नुपर्छ । स्वतन्त्रले चुनाव जितेका कारण हिजोका प्रतिगामी उठेका हुन् कि, उनीहरुको सहयोगले जितेका हुन् कि भन्ने आशंका पैदा भयो । व्यक्तिले लोकप्रियताले जिते पनि स्वतन्त्रले काठमाडौंमा चुनाव जित्नु कठिन हो नि । उहाँले कुनै न कुनै शक्तिका कारण चुनाव जितेको हो । एउटा शक्ति त चाहियो नि ।
यस्तो अवस्थामा भोलि एउटा मानिस डिफल्टर भइदिए के हुन्छ ? कांग्रेस र लोकतन्त्रकै भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
नेपालमा जहानिया राणा शासन पनि थियो । २१ औं शताब्दीमा मानिसका नैसर्गिक अधिकारहरुको कसरी एक्सरसाइज गर्ने भन्ने सन्दर्भअन्तर्गत हिजो बिपीले बहुदलीय व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने कुरा अघि सार्नुभयो । आवधिक चुनावबाट प्राप्त भएको बहुमतले गभर्निङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । मानिसका अधिकारहरुको संवैधानिक ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भनेर हाम्रा नेताले आन्दोलन गरे । कांग्रेसलाई आफूले सधैं शासन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आवधिक चुनाव होस् र बहुमत प्राप्त दलले शासन गरोस् । जसले जिते पनि भयो । २०१५ सालमा ‘कू’ भएपछि ३० वर्ष नेपालमा दलीय व्यवस्था प्रतिबन्धित भयो । २०४६ को परिवर्तनपछि राजासहितको बहुदलीय व्यवस्था आयो । राम्रै भएको थियो तर पनि लक्षित वर्गहरु, गाउँ र दुरदराजमा बस्ने अनि दलित तथा समावेशीका कुराहरु परिपूर्ति नभएको भनेर द्वन्द्व सुरु भयो । माओवादीको द्वन्द्वलाई सेटलमेन्ट गर्न कांग्रेसले ठूलो कुर्बानी गर्नुप¥यो । त्यो बेला धेरै कांग्रेस मारिए । कांग्रेसकै मानिस लुटिए । पर्न त द्वन्द्वमा अरु पनि परे तर निशानामा कांग्रेस परे । जंगलमा बसेका माओवादीलाई सिंहदरबारमा र नारायणहिटीमा बसेका राजालाई जंगललाई कांग्रेसले नै पु¥यायो । यो काम कांग्रेसले गर्न सक्दो रहेछ । द्वन्द्वको कुरा गर्दा गिरिजाबाबुको याद आउँछ । बरु म नरकमा जाउँला तर शान्ति बहाली नगरी छाड्दिनँ भनेर भन्नु भएको थियो उहाँले । बन्दुकमा विश्वास गर्नेलाई बाकसमा विश्वास गर्ने कांग्रेसले बनायो नि त । हामी हारेर केही हुन्न तर राज्यले हार्नुभएन भन्ने भयो । यसकारण कांग्रेस देशका लागि आवश्यक छ । संविधान पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा आयो । देशमा समस्याको समाधान कांगेस बिना असम्भव छ । कांग्रेस हारेर अरुले शासन गरे पनि कांग्रेस दुखी हुँदैन । प्रणाली बाँच्यो भने त्यो ठूलो कुरा हो । ओलीले संसद विघटन गरेपछि चुनावमा गएको भए कांग्रेसले नै चुनाव जित्थ्यो तर परम्परा गलत बस्थ्यो । आम नागरिक, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी, समाजसेवी, उद्योगपति र नागरिकको सुरक्षा प्राजातन्त्रमा हुन्छ तर प्रजातन्त्रको रक्षा कसले गर्न सक्छ भन्ने कुरा उहाँहरुले बुझ्न जरुरी छ । कम्युनिष्ट प्रजातन्त्रवादी होइनन् । तिनीहरुलाई प्रजातन्त्रको सबक सिकाउने काम कांग्रेसले गरेको छ । उनीहरुलाई आवधिक चुनावमा ल्यायो । प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई बचाउने एकमात्र शक्ति कांग्रेस हो । कांग्रेसलाई कमजोर बनाउँदा राष्ट्रियता र लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । प्रजातन्त्र पछि सञ्चारमा यत्रो परिवर्तन भयो । शिक्षामा पनि परिवर्तन भएको छ र स्वास्थ्यमा पनि परिवर्तन भएका छन् । विकास र प्रजातन्त्रको संवाहक कांग्रेस नै भएको हुनाले सबैले कांग्रेसलाई मलजल गर्नु आवश्यक छ ।
सामाजिक सेवामा लाग्ने प्रेरणा कसरी पाउनुभयो ?
मैले सुरुबाट नै जागिरप्रति कुनै दिन आशक्ति देखाइनँ । सारा जीवन सामाजिक सेवामा खर्चिएँ । अलिकति मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि एकमाना खान लाउन पुग्ने परिवरको सदस्य भएका कारणले मलाई समाजसेवातिर नै लाग्ने प्रेरणा मिल्यो । मुख्य कुरा बुबाआमाकै प्रेरणाले समाजसेवामा लागेको हुँ । लत नै के बस्यो भने अर्काको सेवा गर्ने । आफूलाई होइन कि अरुलाई खुसी बनाउँदाको आनन्द बेग्लै हुन्छ । अर्कालाई दुख सास्ती नदिन विषय महत्वपूर्ण हो । अर्कालाई सेवा गर्नु नै धर्म हो भन्ने मान्यताले म समाजसेवातिर लागें । म सामाजिक काम गर्न असाध्यै मन पराउने व्यक्ति हो । अहिलेसम्म कसैलाई पिराइएको छैन, कसैको खाइएको छैन । यस्तो भएपछि मलाई डर पनि केहीको छैन भन्ने भावना आउँदो रहेछ । गल्ती गरियो, कसैलाई बिगारियो भने त्यो नै हामीलाई रोग हुन्छ । त्यसकारले मैले विगतमा फूलबारी क्लबको संस्थापक अध्यक्ष र यहाँका स्कुल र क्याम्पस व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष बनेर पनि सेवा गरें । शिवशक्ति स्कुल र शिवशक्ति क्याम्पसलगायत विकासका लागि मैले काम गरेको छु ।